आजको पञ्चाङ्ग एवम् राशिफल (८ असार २०७९ बुधबार, २२ जुन २०२२) Nepali Digital Newspaper
आजको पञ्चाङ्ग एवम् राशिफल (८ असार २०७९ बुधबार, २२ जुन २०२२)
८ असार २०७९, बुधबार ०१:४०
श्रीशाके १९४४ ग्रीष्म ऋतु नलनामक संवत्सर नेपाल सं. ११४२ वि.सं. २०७९ आषाढ ८ गते बुधबार तद्अनुसार सन् २०२२ जुन २२ तारिख आषाढ कृष्ण पक्षको नवमी तिथि उत्तराभाद्रपद नक्षत्र १०ः०७ पर रेवती नक्षत्र सौभाग्य योग तैतिल करण आनन्दादिमा लुम्ब योग चन्द्रमा मीन राशिमा भ्रमणशील रहला । काठमाडौमा सूर्योदय बिहान ५ः११ मा भयो र सूर्यास्त साँझ १९ः०१ मा हुनेछ । भूमिरज ।
मेष – दिन राम्रो छ । नसोचेको काम बन्ने योग हुनुका साथै अनौठो समाचार पनि सुनिएला । अर्थलाभका अवसर आउने छन् । सामाजिक प्रतिष्ठा पनि बढ्नेछ । सोचेभन्दा बढी नै लाभ होला । यात्रामा सफलता प्राप्त हुनेछ । रसरागमा आकर्षण बढ्नेछ । सुख वृद्धि हुनेछ । मित्रजनको साथ प्राप्त हुनेछ । ऋण, रोग र शत्रुमाथि विजय प्राप्त हुनेछ ।
वृष – आजको दिन सफलताको दर बढ्नेछ । नेतृत्वप्रधान कार्यमा सफलता मिल्नेछ । यात्रामा विशेष लाभ होला । रमणीय र सुखद यात्राको योग छ । जीवनसाथी र आमाको सल्लाहमा गरिएको काममा सफलता प्राप्त हुनेछ । प्रतिस्पर्धाबाट फाइदा उठाउन सकिनेछ । वैदेशिक क्षेत्रबाट लाभ लिने मौका छ । समस्याको समाधान प्राप्त हुनेछ । सन्तानसुख मिल्नेछ । आरोग्यता बढ्ला । बौद्धिक र रचनात्मक काममा सफलता मिल्नेछ । रसरागमा आकर्षित हुनुहुनेछ ।
मिथुन – आजको दिन कार्यक्षमता वृद्धि भएको अनुभूति भए पनि आर्थिक संकट आउनेछ । लेनदेनमा विवाद पनि बढ्नेछ, घरायसी समस्या आउला । मित्र बनेर धोका दिनेहरु प्रकट हुनेछन् । यसका बाबजुद बौद्धिक र रचनात्मक काममा सफलता मिल्नेछ । प्रेममा आकर्षण बढ्नेछ । मिठो भोजन प्राप्त हुनेछ ।
कर्कट – सहज प्रयत्नले लक्ष्यमा पुग्नु हुनेछ तर अरुको काम धेरै गर्नुपर्ला । समयको बचत कम हुने दिन छ । नोकरी तथा राजनितीमा मान(सम्मान पाउने योग छ । अरुको मन जित्न सकिने छ । नसोचेको धन लाभ हुन सक्छ, तर सानातिना काम र घरेलु समस्यामा अल्झनुपर्ने समय छ । यात्रामा सफलता प्राप्त हुनेछ ।
सिंह – भागदौड बढ्नेछ । ऋण, रोग र शत्रुमाथि विजय प्राप्त हुनेछ । प्रेमको बन्धनमा बाँधिने दिन छ । सम्मान र प्रतिष्ठामा वृद्धि हुनेछ । रोकिएका काम सजिलै सम्पन्न हुनेछन् । आर्थिक पक्ष आज सन्तोषजनक रहेको छ । यात्रामा सफलता प्राप्त हुनेछ । जोखिममा नपर्नु हितकर हुनेछ ।
कन्या – ऋण, रोग र शत्रुमाथि विजय प्राप्त हुनेछ । धार्मिक क्षेत्रमा लगानी गरेमा राम्रो प्रतिफल प्राप्त हुनेछ । मनोरञ्जनमा भुलिने समय छ । व्यापारमा मनग्ये लाभ हुनेछ । साथीभाइले पनि राम्रै सहयोग गर्लान् तर आफन्तको सहयोग चाहि नपाइएला । व्यस्तता बढ्नेछ । प्रयासरत काममा सफलता प्राप्त हुनेछ । साझेदारीको काम बन्नेछ । मिठो भोजन प्राप्त हुनेछ । रसरागमा आकर्षण बढ्नेछ ।
तुला – कर्मबल बढे पनि दिन त्यत्ति सफलतादायक नरहला । लेनदेनको समस्याले सताउनेछ, शत्रु पनि बढ्ने छन, ब्यापारमा घाटा बेहोर्नु पर्ला । मान-सम्मानमा भने बढोत्तरी नै आउला । मिठो भोजन खान पाउनु हुनेछ । बोली र व्यक्तित्वको प्रभाव बलियो बन्नेछ ।
वृश्चिक – समय मिश्रित फलदायक रहला । कुरा काट्नेहरू प्रशंसक बन्नेछन् । विवादमा भने नपर्नु हितकर होला । ऋण रोग र शत्रुमाथि ध्यान राख्नुपर्नेछ । लगानी वृद्धि हुनेछ । भोग विलासमा आकर्षण बढ्नेछ ।
धनु – दाम्पत्यसुख बढ्नेछ । साझेदारीको काम बन्नेछ । आकस्मिक निम्तोमा सहभागी हुन पाइनेछ भने धनको आगमन भैरहनेछ । भागदौड वृद्धि हुनेछ । रोकिएको काम बन्नुको साथै लगानी उठाउन चाहेमा सफल रहनुहुनेछ । विवादमा नपर्नु बेस होला । मिहीनेतयुक्त काममा रूचि वृद्धि होला ।
मकर – आशा उत्साह बढ्ला । स्वास्थ्यस्थितिमा सुधार आउने छ, आयआर्जनको स्रोत फेला पर्ला । सामान्यतया लाभ हुने नै दिन छ, तर कृषिजन्य पेसा वा व्यवसायबाट सोचेजस्तो लाभ लिन सकिंदैन । रसराग प्रेममा सफलता मिल्नेछ । आफन्तको साथ मिल्नेछ । उन्नति पदोन्नति हुनेछ । अरुको भर नपरी आफ्नै बलविवेकले कार्य गर्नु हितकर रहनेछ ।
कुम्भ – प्रयासरत काम बन्नेछ । देखापरेको समस्याको समाधान मिल्नेछ । तर शत्रुले सताउने योग छ, सावधान रहनुहोला । नयाँ सम्भावना देखापर्नेछ । बोली र व्यक्तित्वको प्रभाव बढ्ला । यात्रापरक काममा सफलता प्राप्त हुनेछ । वार्तामा सफलता मिल्नेछ । व्यस्त रहनुहुनेछ ।
मीन – मनोकूलको काम बनेर मन प्रशन्न रहनेछ । अनुकूल समय आएको छ, पठनपाठनमा ध्यान दिनु बेस हुनेछ, प्रेमसम्बन्ध बलियो रहनेछ । अधुरा काम हरु बन्ने अरुको विस्वास आफुतिर रहने आफन्तहरुको उचित सहयोग मिल्नेछ । शुभ काममा भाग लिनुहुनेछ । यश वर्चश्व बढ्ला । रसरागमा रुचि बढ्नेछ । पराक्रम बढ्नेछ ।